Aragtiwanaagsan.com – Wasaarada Ganacsiga Gobolka Saaxil oo noqotay hormuudka wasaaradaha Gobolka Saaxil iyo isuduwe Siciid Jama cilmi
Latest update February 20th, 2019 3:13 PM
Reer Suuriya….!! Gob la gumaaday!!!
Ardayadani waxa ka qalinjabisay..machadka Aqoonyahan college ee ingiriisiga,waxay qaadatay diblooma ingiriisiya!!
Wasaarada Ganacsiga Gobolka Saaxil oo noqotay hormuudka wasaaradaha Gobolka Saaxil iyo isuduwe Siciid Jama cilmi
Mar 17, 2018 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
Gudoomiyayaasha(Badhasaabada) goboladu waa Wakiilka Madaxweynaha Matalaya ee sita Calanka Jamhuuriyada dalka Isagaana Madaxweynaha uga Matela Gobolka uu joogo waxaana hoos imanaya dhamaan Lamaha dawlada ee Heer Gobol sidaa darteed waxa uu awood u leeyahay in uu qiimeeyo qirana sida ay uga soo baxeen masuuliyadooda.
02/04/2017 ayaa wasiirkii hore ee wasaarada Ganacsiga iyo maalgashiga caalamigu Dr. Omer Shucayb Mohamed u magacaabay Isu-duwaha wasaarada ganacsiga iyo maalgashiga Ustaad Siciid Jama Cilmi Waaberi ee Gobolka Saaxil.
Isu-duwe Siciid Jama Cilmi waaberi waxa uu la wareegay xilkaasi Wasiirku u igmaday 07-04-2017 oo ku beegnayd maalin Arbaca ah.
Isu-duwe Siciid Jama Cilmi oo hore u ahaa Gud/Kuxigeenkii wasaarada Waxbarashada ee Gobolka Saaxil ayaa ah shakhsi aad u hawl kar ah isla markaasna ah haldoorka aqoonyahanka Gobolka saaxil ayaa Waxqabad muuqda oo la majeerto gaadhsiiyey wasaarada Ganacsiga taas oo uu maanta maamuuskeedii iyo dhiirigelinteedii uu siiyey gudoomiyaha Gobolka Saaxil Mudane Jama Yusuf Ahmed.
Iyadoo maanta oo bishu tahay 08-03-2018 Mudadaas kooban oo ku siman 10 bilood iyo 28 Maalmood ayaa isu-duwaha iyo Wasaaradiisa waxyaabaha u qabsoomay waxa kamida ;
1.Waxaana mudadaas yar ee kooban isu-duwaha iyo wasaaradiisa u hirgalay oo u qabsoomay in ay sameeyaan oo ku guulaystaan xafiis qalabaysan una diyaarsan inuu fuliyo dhamaan adeega qofka ganacsaduhu u baahan yahay oo ay ugu muhiimsan tahay in ganacsadde kastaa marka uu u baahdo liisan (License) inuu si fudud Insha allah dhawaan uga heli doono Xafiiska Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Saaxil sidoo kale qofkii liisan lahaa balse u baahda cusboonaysiin in isaguna si fudud oo waliba dhakhso ah uga heli doono taasi waxay yarayn doontaa amaba meesha ka saari doontaa safarkii uu awal markii hore ganacsaduhu ku tegi jiray caasimadda ee wakhtiga iyo kharashka badaniba kaga lumi jireen.
2. Maadaama shirkad caalami ay la wareegtay maamulka Dekedda Berbera waxay hirgelisay shuruuc caalami ah oo ah in Wasaaradaha Maaliyadda iyo Ganacsiga iyo dhamaan dadka kale ee Stakeholders ah ee isticmaala dekeddu mid kastaaba uu u xidho shaqaalihiisa dirays si loo xaqiijiyo markiiba Institution-ka ama shirkadda uu u shaqeeyo qofkaasi hadiiba loo baahdo loona aqoonsado markiiba hadii dhibaato ama arrimo kale oo muhiim ah looga baahdo, iyagoo taas ka duulaaya waxa markiiba hirgalay una dabaqay nidaamkaas In shaqaalaha Wasaaradda Ganacsiga u sameeyo isu-duwuhu dirays iyaga u gaar ah magaca wasaaradduna xaga dambe ee shaayadda kaga qoran tahay.
3. Waxa sidoo kale xoojiyeen mudadaas uu joogey Isu-duwuhu shaqadda xafiiska in uu xoojiyo in qof kasta oo ganacsade ahi uu yeesho liisan haduu yahay mid wax dhoofinaya (Export), haduu yahay mid wax soo dejinaya (Import), haduu yahay mukhalas (Clearance), iyo hadii uu intaba wada yahay oo wada leeyahayba. Hadii uu liisan leeyahaynna inuu si degdeg ah usoo cusboonaysiisto, taasi waxay keentay inaan wax dakhli ahi kaga habsaamin ganacsatadda oo sidii loogu talo-galay u gutay waajibaadkii saarnaa qaranka dakhli badanna usoo xareeyay mudadaas sanadka ah ee uu joogay oo aan odhan karno waa sanadkii dakhli soo xarayn liisamadda iyo jadiidintoodaba sanadkii ugu sareeyay sida uu noo xaqiijiyey Isu-duwe Siciid Jama.
4. Waxa kale oo uu Isu-duwuhu noo xaqiijiyey in ay aad iskugu soo dhaweeyay oo isku xidhay ganacsatadda iyo Xafiiska Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Saaxil maadaama Wasaaraddu ay tahay mid ganacsatadda u adeegta oo danahoodda, ka warhayntoodda iyo illaalintoodaba u xil-saaran oo aynu odhan karnaba waa wasaaraddii ganacsatadda iska lahayd maadaama mar walba iyaga ay u heelan tahay sidii ay u hormarin lahayd una kobcin lahayd iyaga.
5. Sidoo kale waxa uu Isu-duwuhu noo cadeeyay Maadaama oo shirkadda caalamiga ah ee Dp World la wareegtay gacan ku haynta maamulka Dekedda waxaa lagama maarmaan ah inaanu wada shaqayn yeelano anagoo taas maskaxda ku hayna waxaanu abuurnay jawi wada-shaqayn oo heer sare ah kaas oo aanu la yeelanay maamulka shirkadda ee Dekedda hawlo iyo shaqooyin badan oo na dhexmaray si wanaagsan oo is maqal iyo waliba tixgelin leh noogu dhamaadeen.
Qalinkii: Al-Hadji Mohamed A. Abdi
Maahmaahyo-Cusub….!! Kuwii ugu dambeeyey ee sanadkan 2018ka!! Madaxweynaha iyo sida la yaabka leh,ee Dubia lagoo soo dhaweeyey!! ka daawo aragtiwanaagsan.com
Ardayadani waxa ka...
Reer Suuriya….!! Gob la gumaaday!!! Waxay ahayd..galab..sanadkii 2001 dii, markii aan diyaarad laga leeyahay dalka Suuriya..magaalada Dubay ee imaaraadka…gaar ahaan..madaarka caalamiga ah,ee Dubia international aiport,ka raacay. dhammaan rakaabku waxay ahaayeen..reer suuriya,kaligay...
Ardayadani waxa ka qalinjabisay..machadka...
Maamulaha mareegta Aragtiwanaagsan.com oo saaka...